फेसबुकमा भेटेको महिलाले क्यानडा पठाई दिन्छु भन्दै पुरुषबाट ठगिन् लाखौ रूपैयाँ! – PathivaraOnline
Home > समाचार > फेसबुकमा भेटेको महिलाले क्यानडा पठाई दिन्छु भन्दै पुरुषबाट ठगिन् लाखौ रूपैयाँ!
फेसबुकमा भेटेको महिलाले क्यानडा पठाई दिन्छु भन्दै पुरुषबाट ठगिन् लाखौ रूपैयाँ!
admin December 9, 2020 समाचार, समाज	0
एजेन्सी । सामाजिक संजाल फेसबुक मार्फत चिनजान भएका व्यक्तिबाट एक व्यक्ति ठगिएका छन ।
काठमाडौँको मनमैजु बस्ने खिन्त बिर सारु फेसबुकमा भेटिएका अर्घाखाँची तिलगंगा वडा नं. १ तल्लोटोल बस्ने रेनुका सारु लगायतको समूहबाट लाखौ रुपैया ठगिएका हुन ।
खिन्त बिरलाई क्यानाडा पठाईदिने भन्दै नक्कली प्लेन टिकट समेत देखाई १४ लाख रुपैया ठगेको खुलेको छ । पैसा लिएपछि एकाएक उनि सम्पर्क विहिन भएपछि पिडितले प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए ।
पिडितको जाहेरीको आधारमा अ नुसन्धान गर्दा काठमाडौँको सुन्धाराबाट मुख्य योजनाकार शेख सम्सुर आलोन र रेनुका सारु पक्राउ परेको महानगरीय अपराध महाशाखाले जनाएको छ । पक्राउ परेका मुख्य योजनाकार शेख सम्सुर आलोन भारत पश्चिम बंगाल कलकत्ता बर्दमानका वासिन्दा हुन् ।
उनीहरुको समूहले अन्य तिन जना व्यक्तिहरुबाट समेत १२ लाखको दरले रकम उठाई ठगी गरेको भन्ने खुलेको छ । उनीहरुबाट यदि कोही ठगीमा परेको छ भने प्रहरीको संम्पर्कमा आउन पनि महानगरीय अपराध महाशाखाले अनुरोध गरेको छ । Sajhapage बाट साभार
३५ हजार फीट माथी उडिरहेको जहाजमा जन्मियो बच्चा, भाग्यमानी बच्चाले बाँचुन्जेल निशुल्क जहाजमा उड्न पाउने